HomeAfaan Oromoo“Balaa nutti aggaamee jiru kana ofirraa qoluutu nurra jira” Jaal Marroo, Ajajaa WBO Zoonii Lixaa
Jaal Marroo: Duulli WBO irratti gaggeeffamu gaafa lolli maqaa WBOn jalqaba jaal Elemoo Qilxuu Carcar Xirrootti kun sagalee bilisummaa oromooti jedhee rasaasa ishee duraa dhukassu eegale. Ololli WBO injifachuus gaafa sanaa kaasee hanga har’aatti qabiyyee jijiirrataa adeemaa as gahe. Kan amma injifannoo gama lixaatti argame jedhamus itti fuufiinsa qaama duula dantaa Oromoo dhabamsiisuu durii kaasee jiruuti. Waraanni Bilisummaa Oromoo qaama ummata Oromoo keessaa qaroo ijasaati. Waraanni kun baduun, agartuun Oromoo dhangala’uu waliin tokko. Kun ammoo gonkumaa tahuu hin dandahu. Kanaaf ololli waraana amma deemaa jiru abjuu bututaa hiikkoo dhabe kan durii ammas abjootamaa jirudha.
Gaaffii: Mootummaan Abiy akka waan dantaa Oromoo kabaciisuutti lallabaa jira; gama kaaniin WBO fi ABO mirga ummata Oromoo falmaa jiran diina tokkoffaa godhatee socho’aa jira. Kun maal irraa kan madde sinitti fakkaata?
Jaal Marroo: Waraanni bilisummaa Oromoo umaa addaa bakka biraarraa dhufe miti. Saba Oromoo Abiyyiin dantaan tiksa jedhee lallabu sanarraa dhalate. Ilmaan hubatoo biyyaa sadoofi qananii ofii caalaa xiqqeeffamuu, salphachuufi sharafamuun eenyummaa sabasaanii isaan quuqee filmaata karaa biraa dhabnaan lubbuu ofii qaalii kafalanii kabajaafi qixxummaa namoomaa sabasaaniif malu fiduuf warra qawwee kaasedha. Ijoollee kanatti duuluun saba isaan irraa dhalatanitti duuluudha. Sabni isaanii ammoo saba guddicha dachee bal’oo Oromiyaa keessa jiraatudha. Kanaaf duulli kun duula saba Oromoorratti qiyyaafate, duula gaafa karaa Kaabaan Oromoo Walloorraa eegalee hanga amnaa galma gahuu dhabetu ekeraan as deebi’e. Shirri bifa kanaan hanqaaqamaa ture kan duriirraa wanti adda isa godhu homtuu hin jiru. Yoo jiraates inni miilanaa Oromoo madaa ofiitti quba kaahu baayi’inaan hirmaachisuu isaa qofa.
On bringing the crisis in Oromia to an end.